As Old Computers Are Recycled in Thailand, Locals Pay the Price | Myanmar Business Today
HomeBusinessRegionalAs Old Computers Are Recycled in Thailand, Locals Pay the Price
Hannah Beech and Ryn Jirenuwat (New York Times)
KOH KHANUN, Thailand
Foreign e-waste might be smuggled into the country mislabeled as scrap, said Banjong Sukreeta, deputy director general of the Department of Industrial Works.
At King Aibo Electronics Scrap Treatment Center, schedules written in Chinese note the dates that shipments will be arriving. The three workers in the office onarecent visit were all Chinese.
Suddenly, through the rows of trees,apair of Myanmar workers emerged. The man showed burns on his arms from his work at New Sky Metal but said he had no idea what liquid had caused his wounds.
မီးရောင်မှိန်မှိန် ထွန်းထာသော စက်ရုံထဲက မြေပြင်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ အမျိုးသမီးများက ဘက်ထရီများ၊ ဆားကစ်ပြားများ၊ ဝါယာကြိုများကို ကောက်နေကြသည်။
ဘေးအန္တရာယ်များသော အီလက်ထရောနစ် စွန်ပစ်အမှိုက်များကို တူဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်လည်းကောင်း ဖြုတ်ဖျက်ကြသည်။ အဝတ်ဆုတ်များဖြင့် မျက်နှာကို စည်းထားသည့် အမျိုးသားများက ပယ်ထားသည့် ပစ္စည်းများအား အသုံးပြု၍ ရနိုင်သော သတ္တုများ ခွဲထုတ်ပေသည့် ကြိတ်စက်ထဲသို့ ဂေါ်ပြားဖြင့် ထည့်နေကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရှာဖွေအလုပ်လုပ်နေကြချိန်တွင် အနီးရှိ ကျေးရွာများ၊ လယ်ကွင်းများထဲမှ မီးခိုးများ လုံးတက်လာကြသည်။ ဒေသခံများအနေဖြင့် ထိုမီးခိုးထဲတွင် ဘာပါသည်ကို မသိကြပေ။ ပလပ်စတစ်လား၊ သတ္တုတွေလာ မည်သူမျှမသိ။ သူတို့သိသည်ကတော့ အနံ့အသက် ဆိုးခြင်းနှင့် သူတို့ကို မူးဝေစေခြင်းကိုသာ။
New Sky Metal စက်ရုံမှာ တရုတ်နိုင်ငံက လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ ပြည်သူများနှင့် မြေယာများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသောကြောင့် လက်မခံတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ တစ်ခွင်တွင်ပေါ်လာသည့် လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှာသူများကန့်ကွက်နေသည့် ကြားမှ အဆိုပါ လုပ်ငန်း၏ ဗဟိုချက်မ ဖြစ်လာသည်။ ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့်လည်း အများပြည်သူ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မြိုးမြိုးမျက်မျက်ရသည့် ကုန်သွယ်မှုမှ အကျိုးအမြတ်တို့ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ညှိရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းလာသည့် လျှပ်စစ်ပစ်စည်းစွန့်ပစ်အမှိုက်များကို ပိတ်ပင်လိုက်သည်။ သို့သော် စက်ရုံအသစ်များ ထပ်ဖွင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်ချိန်များစွာကို လူအားဖြင့် ခွဲခြားရှာဖွေဆောင်ရွက်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုကြသည်။
“လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေက တစ်နေရာရာကိုတော့ ပစ်ရမှာပဲ။ တရုတ်တွေက သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကို အရှေ့တောင်အာရှကို ရွှေ့နေတယ်” ဟု ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများတွင် အမှိုက်များ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်နေသည့် Basel Action Network ၏ အကြီးအကဲ Jim Puckett က ပြောသည်။
“ငွေရဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့ တရားမဝင် အလုပ်သမားအများအပြား ရှာဖို့ရယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အများကြီး ညစ်ညမ်းအောင် လုပ်မှပဲ ရမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သုံးစွဲသူများမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မော်ဒယ်အဟောင်များကို စွန့်ပစ်ကာ မော်ဒယ်အသစ်ကို ပြောင်းကိုင်ကြသည့် အလေအထ ခေတ်စားလာသောကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအားဖြင့် အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်အမှိုက်တန်ချိန် သန်း ၅၀ မျှစွန့်ပစ်နေကြသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ပြုပြင်သန့်စင် သုံးစွဲမည်ဟူသော အယူအဆမှာ အတန်ပင် နှစ်ခြိုက်စရာကောင်းပါသည်။
သို့သော် ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ တီဗွီများမှ ရွှေ၊ ငွေနှင့် ကြေးနီတို့ကဲ့သို့သော တန်ဖိုးကြီး ဓာတ်သတ္တုပမာဏ အနည်းကို ထုတ်ယူသည့်အလုပ်မှာ ညစ်ညမ်းပြီး အန္တရာယ်များသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို ပိတ်ပင်လိုက်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကတော့ ၎င်းတို့တွင် ‌သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေများ ကျင့်သုံးမှု အားနည်းခြင်း၊ ‌ခေါင်းပုံဖြတ်ရလွယ်သော အလုပ်သမားအင်အားရှိခြင်း၊ အစိုးရနှင့်စိးပွားရေးသမားအကြား ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းကြောင့် အဆိုပါ အခွင့်အလမ်းကို မြင်ကြသည်။
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုရင် ဆားကစ်ပြားတိုင်း၊ ဝါယာကြိုးတိုင်းဟာ သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတယ်” ဟု Ecological Alert and Recovery Thailand မှ အကြီးအကဲ Penchom Saetang က ပြောသည်။
အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့ကဲ့သို့သော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ အနောက်နိုင်ငံများမှ တင်ပို့လားသည့် အမှိုက်များကို တစ်စီးစ နှစ်စီးစ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ စနစ်တကျ စတင်ငြင်းပယ်လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ထိုင်းစက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ပ အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအပေါ် ပိတ်ပင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း New Sky Metal အပါအဝင် နာမည်ကြီးစက်ရုံ အနည်းဆုံး ဆယ်ခုကို ဝင်စီးခဲ့သည်။
“အခုအခါမှာတော့New Sky က ပိတ်သွားပါပြီ။ အပြီးတိုင် ပိတ်သွားပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေ ဝင်လာတာ မရှိတော့ပါဘူး” ဟု Leam Chabang Port အကြီးအကဲ Yutthana Poolpipat က ပြောသည်။
သို့သော် မကြာသေးခင်က သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာတွင် စက်ရုံက ဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အခြား စက်ရုံများမှာလည်း ဆက်လက် လည်ပတ်နေကြသည်။ ဤသည်မှာ တိုင်းပြည်၏ အားနည်းသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးစနစ်နှင့် အကျင့်ပျက်ချစားမှုကို ထင်ဟပ်နေသည်။
SourceHannah Beech and Ryn Jirenuwat (New York Times)
Previous articleU.S. Settles on Outline of Elusive Phase One Trade Deal
Next articleJapanese Shares Dip as Investors Await Clarity on U.S. Tariffs